आदिवासी जनजाति र मधेसी महिलाहरुको सहकार्यले नयाँ आन्दोलन जन्माउँछ : सुशिला श्रेष्ठ | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
० संघीय समाजवादी फोरम नेपालभित्र महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो पार्टीको महिलाहरुको अवस्था कमजोर छ । पार्टीमा लाग्ने भनेको राजनीति गर्ने, राजनीति गर्ने भनेको दुख पाउने, अभाव हुने अनि घर व्यवहार हेर्न नभ्याउने आदि थुप्रै कारणहरु छन् । पहिलो त हामी कहाँ महिलाहरुले राजनीति गर्नुुहुँदैन भन्ने भयो । त्यसमा पनि अलि बाहिर हिँड्ने भएपछि चारित्रिक लान्छना लाग्ने भयो । फेरि राजनीति गर्दा सबैलाई मिलाएर लैजानको लागि शीप चाहियो, विधि र धैर्य चाहियो । त्यसो भएकोले हामीकहाँ राजनीतिमा लाग्ने महिलाहरु कम छन् ।
त्यसबाहेक नेपालको महिला अधिकार आन्दोलनले जनजाति महिलाहरुको समस्या पनि चिन्न सकेन जस्तो लाग्छ । आफ्नो मुद्दा बोक्यो भने पो जाने । आफ्नै मुद्दा बोकेन भने त्यसको पछि किन लाग्ने, त्यहाँ गएपछि के पाइन्छ भन्ने प्रश्न आउनु स्वभाविक हो । त्यसकारण यहाँ जनजातमहिलाहरुको आर्षण अलि कम भएको पाइन्छ ।
० नेपालको महिला आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
केही केही महिलाहरुले महिला मुद्दा उठाए । जस्तो बालविवाह, बहुविवाह आदि । पछि साहाना प्रधानको समयदेखि महिलाहरुलो शिक्षामा पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठ्यो । त्यसकारण भन्नु पर्छ कि अहिले महिला आन्दोलन महिलाहरुकै समस्यालाई केन्द्रित गरेर आन्दोलन भएको छैन ।
एक त महिलाहरु संगठित छैनन् । किन संगठित छैनन् भन्दा महिलाहरु जहिले पनि पुरुषहरुको लागि मात्र काम गर्नेहरु भए । त्यसो भएको कारणले महिलाको मुद्दै अगाडि नआउने अनि आएपनि पुरुष साथीहरुले कता लाग भन्ने हो त्यता लाग्ने अवस्था छ अहिले । उनीहरुको जहिले पनि सहयोगीको भूमिका मात्र भएको पाइन्छ । त्यसबिचमा पुरुषहरुले जुन महिलाहरु त्यस्तो सहयोगी भूमिका खेल्दैन तिनीहरुलाई कसरी पन्छाउने भन्ने समेत खेल खेलिरहेका हुन्छन् । राजनीतिमा यस्तो खेलिन्छ । भन्नाले उनीहरु महिलाहरु सहयोगी मात्र भइरहोस् अगाडि नआओस् भन्ने चाहन्छन् ।
० राजनीतिमा लाग्ने महिलाहरुलाई हिंसाको खतरा बढी छ भनिन्छ । तपाइँको विचारमा कस्तो अवस्था छ अहिले?
राजनीतिमा लाग्ने मात्र होइन, जो घरबाट बाहिर निस्कन्छ, सबै हिंसाको खतरामा छन् । राजनीति क्षेत्रमा पनि यो छ । महिलाहरु कहीँ पनि सुरक्षित छैनन् ।
० जनजातिमा महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ? उनीहरु घर, परिवार र समाजमा कति स्वतन्त्र छन्?
बाहुन क्षेत्री समुदायका भन्दा आदिवासी जनजाति महिलाहरु अलि बढी स्वतन्त्र र निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । घरपरिवारमा उनीहरुको सुनुवाइ हुन्छ । म नेवारकी छोरी, राई परिवारमा बिहे गरेर आएँ । घरको केही निर्णय गर्नुपर्यो भने मेरा आमाजुहरु मलाई सोध्नुहुन्छ । त्यस्तै गरेर म पनि सोध्छु । त्यो चलन त बाहुन वा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुमा पाइँदैन । यसको अर्थ जनजातिहरुका मातृप्रधान समाजको स्वरुप छ ।
तर यो स्वभाव, गुण वा विशेषता राजनीति र समाज निर्माणको क्षेत्रमा भने छैन । घरपरिवारको निर्णय गर्नसक्ने आदिवासी जनजाति महिला राजनीतिमा भने आउन सकिरहेको अवस्था छैन । म के पाउँछु भने यसका लागि महिलाहरु राजनीतिमा जाने इच्छा व्यक्त गरिरहेका छैनन् । तर पठाउँदा गर्न चाहीँ सक्छन् । भनेपछि नदिएको पनि हो जान नचाहेको पनि हो भन्न सकिन्छ ।
अलिकति पढेका जनजाति महिला विदेश जान खोज्छन् । अनि महिलालाई किन पढाउने भन्दा लाहुरेसँग बिहे गराउन भन्ने समेत सुनिन्छ । पढेर पनि महिलाहरुमा आफ्नो खुट्टामा आफै उभिउँ भन्ने चेतना राम्रोसँग जागिसकेको छैन सबैतिर । उनीहरुले सिकेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकले पनि त्यो कुरा दिएन । पढेर मात्रै पनि के गर्ने । हामीले पढ्ने भनेको आखिरमा त्यही हिन्दु धर्म र हिन्दु संस्कार मात्र त हो । अझ भन्नु पर्दा पढेलेखेपछि आफ्नो जातीयता र परम्पराले दिएको अधिकार पनि छोडिदिने संभावना छ । आफै खुम्चिरहेको छ । जस्तै, पहिले हामीले बिहे गर्दा कहिले पनि छोरीको खुट्टा धुने चलन थिएन, अब शुरु भयो ।
हिजो हामीसँग भएको राम्रो संस्कार पनि राम्रो हो भन्ने ठाउँ पाइएन । हाम्रो चेनताको स्तर कमजोर भएकोले आफुले गरेको राम्रो कामलाई पनि राम्रो भन्न सकिरहेका छैनौं । राज्यले जे दिएको छ त्यसैलाई हो भनेर जानुपरेको कारणले पनि यस्तो भइरहको हो ।
० महिला आन्दोलनमा जनजाति महिलाहरुको ठाउँ कहाँ छ जस्तो लाग्छ?
पहिला एमालेमा बस्दा लामो समय महिला संघमै काम गरें, त्यहाँको विधान हेरें । त्यहाँ जुन विभेद भनेर भनिएको हो, त्यस्तो कुनै पनि समस्या हाम्रो आदिवासी महिलाहरुमा छैन ।
अहिले जनजाति महिलाहरुका लागि भनेर विधान बनाउँदैछु र सोच्दै छु के के विषयलाई ल्याउनु पर्ला भनेर । के कुरा ल्याउँदा जनजाति महिलाहरुको मन छुन्छ भन्ने चुरो भेट्टाउन अझ नसकेको हो कि जस्तो भइरहेको छ ।
त्यहाँ जनजातिका महिलाहरुको समस्या उठाइँदैन । त्यहाँ उठाएका समस्याहरु जनजाति महिलाहरुका समस्या हुँदैनन् । त्यहाँ महिलाहरुको समस्या भनेको जुठो खानुपर्छ, खुट्टाको पानी खानुपर्छ, खुट्टा ढोग्नु पर्छ भनेर भनिन्छ । यस्तो समस्यालाई महिलाहरुको राष्ट्रव्यापी समस्याको रुपमा प्रस्तुत गरिदियो, जुन जनजातिहरुकोमा छँदैछैन । त्यसकारण राष्ट्रिय महिला आन्दोलनले जनजाति महिलाहरुको समस्या पहिचान पनि गरेको छैन । स्वभाविक हो, जहाँ आफ्नो समस्याको संवोधन गरिन्छ त्यहाँ पो मान्छे लाग्छ नि ।
त्यसकारण जनजाति महिलालाई राजनीतिमा ल्याउन नसक्नुको कारण उनीहरको समस्याको पहिचान नै गर्न नसकेकोले हो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ ।
पार्टीले आमाको पहिचान र आफ्नो समाज आफैले निमार्ण गर्ने सवाललाई लिएर जाँदा अलिकति महिलाहरु आकर्षित भएर आफ्नो लागि लड्न सिक्छन् कि भन्ने आशा छ । उनीहरुको अगाडि नबढ्ने बानी बढी भएकोले कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने कुरा सोच्नु पर्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ ।
० मुलधारको महिला आन्दोलनले जनजाति महिलाहरुको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेपछि जनजाति महिलाहरुको पनि अलग्गै महिला आन्दोलन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिले नेपालको महिला आन्दोलन एउटै नश्लका महिलाहरुले मात्र हाँकिरहेको अवस्था छ । हुन त पुरुषहरुमा पनि यस्तै छ । उनीहरुले महिला आन्दोलनका नाममा आफुले भनेको कुरामा हो भन्नेहरुलाई नै अगाडि ल्याइरहेको अवस्था छ । हुन त जनजाति महिलाहरु त्यहाँ पनि त छन् तर आफ्नो खालको मुद्दा नै त्यहाँ स्थापित गराउन सकिरहेको छैन ।
त्यसैले छुट्टै जनजाति महिलाहरको आन्दोलन पनि चलाउनु परेको छ । त्यसपछि मुलधार भनिएको महिला आन्दोलनभित्र पनि जनजाति महिलाहरु छिरेर त्यहाँ आफ्ना मुद्दालाई उठान गराउनका लागि लड्नुपरेको छ ।
हामी आदिवासी महिलाहरुमा संगठनै बनाएर पनि नेतृत्वको अभाव छ । जिम्मा लिएर काम फत्ते गर्ने मानिसको अभाव छ । राजनीतिले यो सब गर्न सिकाउँछ तर यहाँसम्म पुग्नलाई जनजाति महिलाहरुमा अझ इच्छाशक्तिको अभाव देखिरहेको छु । अब भने सबै जनजाति महिलाहरु आफ्नो हकको लागि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
० जनजाति महिलाहरुलाई संगठित गर्नमा के कठिनाइहरु छन्?
अहिलेको अवस्थामा उनीहरुलाई जनजाति पुरुषहरुले नै उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । घरमा जस्तो भएपनि संगठनका काममा अहिले पनि पुरुषहरु नै अगाडि छन्, उनीहरुको सहयोगको आवश्यकता छ । उनीहरुलाई प्रोत्सहन पनि दिनुपर्यो, अनि सिकाउनु पनि पर्यो । जनजाति महिलाहरुलाई कुरा बुझाइदियो भने काम गर्न सक्छन् ।
० यसमा जनजातिहरुकै कुनै स्वभावगत समस्या पनि छ्न कि? किन अगाडि आउन चाहँदैनन्?
महिलाहरु दुबै प्रकारका भेटिन्छन् । एकातिर कोही आफु अगाडि जाने होइन, अरुले निर्णय गरिहाल्छन् आफु पछि लाग्ने हो भन्ने सजिलो मानसिकता पाइन्छ भने फेरि सबै मिलेर समुहगत कार्यमा सहभागिता देखाउन नसक्ने खालका पछि छन् । उनीहरुमा सहकार्यको कमी पाइन्छ ।
० राष्ट्रिय मुद्दामा अगाडि बढ्ने कम भएपनि आफ्नो पहिचानको लागि जनजातिहरु आदिवासीहरु अहिले खुलेर अगाडि आइरहेको देखिन्छ । यस पहिचानको आन्दोलनमा जनजाति महिलाहरु कति सक्रिय भएर अगाडि आइरहेको पाउनुहुन्छ ?
जनजाति महिलामा चेनता आएको नआएको भन्दा पनि अहिलेको जनजाति आन्दोलनले वा पुरुषहरुले महिलाहरुलाई भेषभूषामा आउनमात्र लगाइराखेको जस्तो देख्दैछु । यति गरेपछि पहिचान सुरक्षित हुन्छ भन्ने सिकाइएको छ । उनीहरु त्यसैमा दङ्ग छ अनि पुरुष साथीहरु पनि दङ्ग हुने भयो — तैं दङ्ग, मै दङ्ग, हामी सबै दङ्ग भनेजस्तै छ अहिले ।
कमसेकम म गुरुङ हुँ, म तामाङ हुँ, म नेवार हँु भन्ने भावना पनि पुरुषहरुले महिलाहरुमा जगाइदिन नसकेको अवस्था हो । नभए जनजाति आन्दोलनमा लागेको जनजाति संघले आफ्ना कमिटीहरुमा ५०, ५० प्रतिशत महिला राखेर नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्ने थियो । उनीहरुलाई पनि सिकाउँदा के हुन्थ्यो त?
हरेक जातीय संगठनका महिला संगठनहरु सक्रिय नै छन् । तर त्यो सक्रिय भनेको दुइतीनटा कुरामा सक्रिय भइरहेको देखिन्छ — एउटा खादा ओढाउनेमा र माला लगाइदिनेमा, अर्को खानपिन गराउनेमा अनि अर्को भेषभुष लगाएर जुलुसमा हिँडिदिनेमा ।
० भनेपछि नेतृत्वमा जनजाति महिलाहरु आएका छैनन् ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । कोही छ भने भन्नुस् । तामाङ, मगर, शेर्पा वा नेवार महिलाहरुको कार्यक्रममा महिलाहरु त्यति धेरै निस्कन्छन् । अझ गैर जनजाति धार्मिक कार्यक्रमहरु, जस्तो कलश बोक्नेमा, तीज मनाउने पनि जनजाति महिलाहरुको सहभागिता देखिन्छ । त्यस्तो कार्यमा हाम्रो शक्ति खर्च भइरहेको छ । यसमा चाहीँ चिन्ता लागिरहेको छ ।
० धर्म संस्कृतिको कुरा आयो । अहिले जनजाति महिलाहरु आफ्नो संस्कृति र परम्पराभन्दा पर हिन्दु संस्कृतिका चाडपर्वमा भाग लिन थालेको देखिन्छ । किन यस्तो हुन थालेको होला?
यसमा राज्यको भूमिका छ । जस्तो राज्यले तीजको लागि भनेर एक दिन छुट्टी दियो, अरु जातीहरुमा त्यस्तो बिदा दिइँदैन । राज्यले जुन कुरालाई महत्व दिइन्छ त्यसमा जनता स्वभाविक रुपले आकर्षित हुन्छ । यो हामीले रोक्न नसकेकै हो । हामीले अहिलेसम्म आफ्ना जनजाति महिलाहरुलाई यो हाम्रो पहिचान होइन, भनेर भन्न पनि सकिरहेको छैन ।
० यस्तो अवस्थामा जनजाति महिलाहरुलाई पहिचानका क्षेत्रमा अगाडि ल्याउन के गर्नु पर्छ?
उनीहरुलाई पहिला पहिचान भनेको के हो र किन यसको बारेमा सचेत हुन जरुरी छ र यसमा लाग्दा हामीले के पाउँछौं भनेर बुझाउनु पर्छ । हामी हिंसा रहित र सम्मानित रुपमा अगाडि बढ्न यो पहिचानको मुद्दामा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
० संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ?
अब पार्टी नै भरखर निर्माण भएको अवस्था छ । सबै ठाउँमा सबै तहका कमिटीहरु बनिसकेको छैन । र बनेका ती कमिटीहरुमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्युन छ । सबै जिल्लामा महिलाहरुको कमिटी बनिसकेको छैन । प्रदेश स्तरीय कमिटी र जिल्ला स्तरीय कमिटीहरु बनाउने पर्ने छ । तर त्यो बनाउनको लागि पनि पुरुषहरुको सहयोग बेगर सकिँदैन । यसका लागि अभियानको रुपमा जाऔं भनेको छु ।
पार्टीको संरचनामा त महिलालाई स्थान दिइएको छ नै । तर पनि हाम्रो प्रतिशत पुग्दैन । कार्यसमितिमै पनि राख्नुपर्छ भन्छौं, ल्याउनुस् न, भन्नुहुन्छ । तर को महिला राख्ने भन्ने नै अहिलेको सवाल हो । त्यति पनि ल्याउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । अहिलेको कुरा गर्दा हामीमा राजनीतिक संस्कृति बसेकै छैन ।
अहिले रुख रोपौं, मलजल गरौं, भोलि फल लाग्ला, त्यसमा मैले खान नपाएपनि भोलि मेरा सन्तानले खान पाओस् भन्ने सोचाइले राजनीति गर्नुपर्यो ।
कमसेकम यो पार्टीमा बस्दा मलाई महिला भएको कारणले र महिला नेतृत्वको लागि पार्टीले गर्न दिएन भन्ने आभास हुन दिएको छैन । म त भन्छु यहाँ आउन चाहने, गर्न चाहने महिलाहरुका लागि प्रशस्त ठाउँ छ ।
० अहिले संघीय समाजवादी फोरममा तपाइँ जनजाति महिला र मधेसी महिलाहरु दुबै पक्षलाई समान रुपमा नेतृत्व दिँदै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्मको तपाइँको बुझाइमा नेतृत्वमा आउन चाहने जनजाति महिलाहरुको र मेधसी महिलाहरुको स्वाभावमा कस्तो समानता वा भिन्नता पाउनुभएको छ?
एकताको हिसाबले कार्यक्रमहरुमा सहभागिता बढाउने काममा मधेसी महिलाहरु अगाडि छन् । मधेस आन्दोलनबाट उहाँहरुमा जुन किसिमको एकता बनेको छ, त्यो सम्मान गर्न लायकको छ । तर बुझाइ कमजोर भएका धेरै छन् । अर्कोतिर हेर्दा पहाडमा वा जनजातिहरुमा त्यो पनि जागरुकता त्यति छैन ।
जनजाति महिला र मधेसी महिलाहरुलाई एकै ठाउँमा राख्दा, सहकार्यको भावना विकास गर्दा दुबै पक्ष लाभान्वित हुने अवस्था छ । तर हाललाई त्यो तहसम्म समन्वय गर्न सकिरहेको छैन । मेरो विचारमा यो सहकार्य नै हाम्रो बल हो । आदिवासी जनजाति र मधेसी महिलाहरुको सहकार्यले नयाँ आन्दोलन जन्माउँछ ।
(नेपालको महिला अधिकार आन्दोलन, त्यसमा जनजाति महिलाका मुद्दा र जनजाति महिलाहरुको नेतृत्वको विषयमा केन्द्रित भई संघीय समाजवादी महिला फोरमकी इन्चार्ज सुशिला श्रेष्ठसँग इसमता डटकमका राजेन मानन्धरले लिएको अन्तरवार्ताको अंश सान्दर्भिक ठानेर यहाँ पुनःप्रकाशित गरिएको छ: सं.)
Posted by admin on Feb52017. Filed under Breaking News, Slide News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट, फोटो. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
66 Comments for “आदिवासी जनजाति र मधेसी महिलाहरुको सहकार्यले नयाँ आन्दोलन जन्माउँछ : सुशिला श्रेष्ठ”
March 24, 2017 - 4:31 pm
March 25, 2017 - 2:49 am
love your website, thanks and victual the good berth check the latest casino bonus offers
Через того вроде, положим, выглядит наша помещение, дозволительно понятно установить наш жизненный уровень. Высококачественно а также со вкусом завершенный исправление предоставляет мочь каждому индивиду поживать изысканно и комфортно. В частности, естественный подлунная нашего жилья отражает характер абсолютно всех проживающих в нём членов семьи, их круг интересов а также желания, а кроме того вкусовые качества. Улучшение квартиры и дизайнерский подход помещений. Первостепенное чувство на человека, угодившего в прозелит чертог, производит ремонт и также улучшение жилья. Исправление помещений может иметься различным: через поверхностного и перед евроремонта и имеет громадное значение ради общего стиля жилья.
Делая ремонтные работы в квартире, всяк стремиться подсвежить её, исполнять больше уютнее. В махина квартире в частности, сегодня позволительно создать из обычного проёма, в длинном и следовательно неуютном коридоре, уникальную арку иначе взамен элементарных обоев обработать стены привлекательным накатом. Ключевым этапом в каком либо помещении жрать его собственная внутренняя улучшение, сделанная профессионально, стильно и со стилем. Да и сиречь сможет любого человека оставить безразличным прекрасное сосредоточение обоев и коврового покрытия, эксклюзивный «дует» кафельной плитки да и подвесного потолка. Ведь улучшение проводится таким образом, чтобы того дабы сменить предварительно полной неузнаваемости вид того иначе другого дома, и дабы каждая деталь в нём была для своём месте, формировала уют и еще простоту в использовании.
March 30, 2017 - 1:04 am
love your website, thanks and victual the kind field check the latest online casino bonus offers
madden 17 coins mobile coins for sale
April 1, 2017 - 1:10 pm
April 4, 2017 - 1:51 am
attraction your website, thanks and camouflagebconfine the kind job check the latest online casino bonus offers
April 6, 2017 - 1:47 am
limitless website! sanctify up the cyclopean work. visit my website only if you are overwhelming 21 check this adult toys portal
April 7, 2017 - 8:47 am
April 8, 2017 - 2:15 pm
what works better viagra cialis or levitra. click the up coming site. compare levitra to cialis.
April 9, 2017 - 4:20 am
mammoth website! resources up the stupendous work. visit my website only if you are overwhelming 21 check this online adult toys portal
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy viagra recommended you read marry
exclaimed reputable canadian online pharmacies husband
April 12, 2017 - 2:46 am
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy canadian drug stores people
friend click site carried
April 12, 2017 - 3:02 am
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy review canadian pharmacy within
land canadian drug stores past
April 12, 2017 - 4:03 am
http://canadian-ph.life/ reputable canadian online pharmacies canadian pharmacy lord
chance canadian drug stores hundred
April 12, 2017 - 10:40 am
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy review canadian pharmacy perfect
sometimes canadian pharmacy review silence
April 12, 2017 - 11:33 am
http://canadian-ph.life/ canadian drug stores canadian pharmacy short
filled canadian pharmacy rich
April 12, 2017 - 11:36 am
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy canadian pharmacy take
reply canadian drug stores places
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy review canadian pharmacy cialis letter
knowledge canadian pharmacy cialis wife
April 12, 2017 - 6:52 pm
http://canadian-ph.life/ canadian drug stores reputable canadian online pharmacies late
rose canadian drug stores bring
April 12, 2017 - 7:44 pm
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy cialis canadian pharmacy very
seen canadian pharmacy viagra us
April 12, 2017 - 9:10 pm
http://canadian-ph.life/ read what he said canadian pharmacy country
word reputable canadian online pharmacies cast
April 13, 2017 - 2:39 am
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy canadian pharmacy hopes
myself canadian pharmacy seeing
April 13, 2017 - 3:33 am
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy canadian pharmacy cialis while
let additional hints heard
April 13, 2017 - 4:16 am
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy viagra get more degree
hour canadian pharmacy ought
April 13, 2017 - 5:28 am
http://canadian-ph.life/ reputable canadian online pharmacies canadian pharmacy cialis beautiful
didn’t canadian pharmacy much
April 13, 2017 - 10:39 am
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy review canadian pharmacy passed
notice canadian pharmacy review why
April 13, 2017 - 11:34 am
http://canadian-ph.life/ canadian pharmacy viagra website here before
were canadian pharmacy books
April 13, 2017 - 3:24 pm
apresentg cheap viagra stalkedw erection pills rofi
April 13, 2017 - 4:35 pm
tneart http://erectionpillsvcl.com wrespecti canadian pharmacy viagra epartyv
mgeta buy generic cialis bconversationb viagra for women vevere
April 13, 2017 - 11:32 pm
xchurchn viagra for sale funlessv viagra coupon srichx
April 14, 2017 - 12:39 am
ieasyg levitra 20mg mcourtt levitra 20mg fhusbandw
April 14, 2017 - 2:35 am
xrighte ed drugs znaturalm generic levitra creachedw
April 14, 2017 - 3:29 am
zformert http://erectionpillsvcl.com zhappenedq erectionpillsvcl.com cdoorv
gsupposedr viagra vs cialis vs levitra anameq buy viagra jcomfortn
bservants cialis vmiddlel herbal viagra nsira
April 14, 2017 - 4:04 pm
croundr http://erectionpillsvcl.com icleare buy generic cialis online kstonea
April 14, 2017 - 6:04 pm
chimselfa buy cialis online yfrontz over the counter viagra dlivedi
April 14, 2017 - 7:19 pm
bmorningp erectionpillsvcl.com ccareq levitra coupon zwhyl
April 15, 2017 - 12:17 am
fhistorym http://erectionpillsvcl.com egivel viagra coupon bconditionn
April 15, 2017 - 6:07 am
lbeyondi viagra online gthoughtt generic viagra wclothess
athrowni canadian pharmacy viagra athatu best place to buy cialis online kdoingz
April 15, 2017 - 1:07 pm
where to buy cialis over the counter buy cialis online safely online pharmacy viagra viagra buy generic levitra online buying generic levitra online
April 15, 2017 - 2:57 pm
buy cialis buy generic cialis best place to buy generic viagra online buying viagra online buying generic levitra online levitra online pharmacy
April 15, 2017 - 9:38 pm
cialis buy generic cialis buying viagra online viagra online canadian pharmacy comprar levitra online levitra online
April 15, 2017 - 11:32 pm
cialis where to buy cialis over the counter viagra online buy generic viagra online order levitra online order levitra online
April 16, 2017 - 6:58 am
where to buy cialis online buy cialis cheap viagra online viagra levitra online pharmacy buying generic levitra online
April 16, 2017 - 1:35 pm
best place to buy cialis online buy cialis online pharmacy viagra viagra online canadian pharmacy levitraonline.life levitra online cheap
http://onlinepaydayloans.review best payday loans best canadian pharmacy canadian online pharmacy reviews
payday loans online no credit check payday loans best canadian online pharmacy viagra online canadian pharmacy buy cialis buy generic cialis online order viagra online viagra online comprar levitra online levitra online canada
April 17, 2017 - 3:23 am
best payday loans online payday loans no credit check canadian pharmacy online canadian pharmacy meds
April 17, 2017 - 4:13 am
payday loans online no credit check no credit check payday loans my canadian pharmacy canadianpharmacyon.review buy cialis canadian cialis best place to buy viagra online best place to buy generic viagra online levitraonline.life buy levitra online cheap
April 17, 2017 - 4:34 am
3 month payday loans online payday loans direct lenders canadian pharmacy online canadian pharmacy cialis
April 17, 2017 - 11:25 am
best payday loans payday loans online direct lenders only canadian pharmacy meds canadian pharmacy reviews http://buytadalafilgu.com buy cialis canadian viagra viagra online best place to buy levitra online levitra online pharmacy
April 17, 2017 - 6:54 pm
http://onlinepaydayloans.review fast payday loans canadianpharmacyon.review canadianpharmacyon.review
April 17, 2017 - 10:35 pm
fast payday loans payday loans online no credit check canadian pharmacy viagra canadian pharmacy review buy cialis cheap cialis cheap viagra online viagra online no prior prescription comprar levitra online levitra online
klongx http://buytadalafilonrx.com lgivings buy cialis online claidg
April 18, 2017 - 5:55 am
stemperk http://buytadalafilonrx.com ctastet cialis us buy kmistressi
April 18, 2017 - 11:38 am
efeelingsa http://buytadalafilonrx.com xstopz buy cialis health pharmacy gwarmu
hgardens buy cialis for daily use online mmakeq buy cialis online omuchi
April 18, 2017 - 8:53 pm
vmeetv buy cialis online rlengthg best place to buy cialis online canada ahowg
April 19, 2017 - 4:36 am
cgeneralt http://buytadalafilonrx.com ppaidw buy cialis online best vmoneyc
April 19, 2017 - 11:00 am
private health care st kitts medical school
http://genericsildenafil.top/ – generic viagra dangers
buy viagra what does venereal disease look like
April 19, 2017 - 12:16 pm
fviewl http://buytadalafilonrx.com hsupposedi buy generic cialis online canada ononey
April 19, 2017 - 4:58 pm